Soosaarayaasha Nidaamka Qalabka Mashruuca ahama | Shiinaha ahama Steel Mash System Factory & Shirkado
5000L afar markab oo lagu kariyo: mash, haanta lakabka, kettle, Whirlpool
Mashing / tunta waxay ka samaysan tahay bir bir ah ama naxaas. 2000L Mash tun waa weel loo isticmaalo habka wax lagu shiidayo si loogu beddelo istaatiijyada ku jira miraha la shiiday oo loo beddelo sokor si loogu khamiro
4000L afar markab oo lagu kariyo: mash, haanta lakabka, kettle, Whirlpool
2000L ahama Steel Brewhouse
Magaca badeecada: 2000L ahama birta birta ah inta badan waxaan isticmaalnaa nadaafada SS304, qalabka SS316 si aan u sameysano taangiga biirka. 1.Mash Nidaamka Sharaxaadda 2000L Mash tun Mashing / tunto waxa lagu sameeyaa bir bir ah. Mash tun waa weel loo isticmaalo habka wax lagu shiido si loogu beddelo istaatiijyada ku jira miraha la shiiday oo loo beddelo sonkor sonkor ah si loogu khamiro. Taangiga 2000L Lauter Tunka waxaa loo adeegsadaa shaandheynta iyo cadeynta dareeraha sonkorta (oo loo yaqaan wort) ee ka soo baxa biyo kululeeyaha kululeeyaha (loo yaqaan mash) ee com ...
1000L ahama Steel Brewhouse
Caadi ahaan waxaan isticmaalnaa nadaafadda SS304, qalabka SS316 si aan u sameysano taangiga soo saarida biirka